Maxaa ka jira in Costa uu doonayo inuu ka tago Chelsea isla markaana uu gudbiyay codsi uu ku tagayo? – Gool FM
Byare July 18, 2016
(London) 18 Luulyo 2016. warar ka imaanaya Spain ayaa sheegay in Diego Costa uu isku dayayo inuu khasbo inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Atletico Madrid isla markaana uu ku wargaliyay tababre Antonio Conte inuu doonayo dib ugu laabashada kooxdiisii hore.
laakiin sida ay fahansan tahay Goal.com Diego Costa malahan wax qorshe ah uu kaga tagayo Blues isla markaana ma dhiibin wax codsi ah uu ku tagayo.
ilo wareedyo aad ugu dhow dhow 27-jirka reer Spain ayaa u sheegay Goal in weeraryahanka uu ku faraxsan yahay Chelsea mana eeganayo inuu ka dhaqaaqo.
Atletico Madrid ayaa suuqa ugu jirta sidii ay ku heli lahayd weeraryahan cusub, iyadoo madaxwaynayaha kooxda reer Spain uu qishay inay qorsheyn doonaan inay u soo dhaqaaqaan Costa, kaa oo 2014-tii uga soo tagay Vicente Calderon adduun dhan 32-milyan oo bound.
“Costa sanado yar ayuu inoo soo ciyaaray dhab ahaantiina waa ciyaaryahan fiican, ma jirto cid dafiri karta midaa,” ,” Enrique Cerezo ayaa sidaa yiri usbuucii la soo dhaafay.
“Ma garanayo haddii uu Costa la hadlay Conte, laakiin waxaynu si adag uga shaqeynaynaa inaan ciyaartoyda ugu fiican keeno Atletico Madrid.”.
Chelsea ayaa durba adkeysay weerarkeeda kaddib markii ay 33-milyan kula soo wareegtay weeraryahanka Marseille Michy Batshuayi waxaana u xigtay inay sabtidii la soo saxiixatay xiddiga qadka dhexe ee daafaca Leicester City N’Golo Kante.